Puntland oo ku dhawaaqday kordhinta sugida amniga Maalmaha Ciida | Banaadir Times
HomeUncategorisedPuntland oo ku dhawaaqday kordhinta sugida amniga Maalmaha Ciida
Taliska Ciidamada Booliska Gobolka Bari ayaa bilaabay qorsho lagu kordhinayao sugida Amniga degaannada Gobolka Bari gaar ahaan Magaalada Boosaaso inta lagu jiro Maalmaha Ciida Soonfureed ee nagu soo wajahan.
Taliyaha Ciidamada Booliska Gobolka Bari oo uu wehliyo Xeer Ilaaliyaha Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida & dambiyada Culus ee Shanta Gobolka ee Puntland ayaa waxaa ay kormeer amni ku tageen Suuqa weyn ee Magaalada Boosaaso halkaa soo uu ka socdo dukaameysiga la xiriira u diyaar garoowga Maalmaha Ciida.
Xeer Ilaaliyaha Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida & dambiyada Culus ee Shanta Gobolka ee Puntland Gaashaanle Xuseen Axmed ayaa sheegay in Ciidamada Booliska Gobolka Bari ay si wanaagsan u sugayaan amniga Magaalada Boosaaso, iyaga oo wadashaqeyn la helaya dadka Shacabka ah.
Waxaa uu faray Saraakiisha Ciidamada Booliska Gobolka Bari inay dardar geliyan howlaha sugida Amniga Magaalada Boosaaso maalmaha Ciida, waxaana uu u digay Ciidamada hubka ku dhex qaata Magaalada, iyaga oo aan Shaqo ku jirin.
Magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari ayaa waxaa ay kamid tahay Magaalooyinka Maalmaha Ciida ugu mashuulka badan, waxaana mararka qaar ka dhaca weeraro iyo dilal qorsheysan oo ay mas’uuliyadooda sheegtaan Ururka Al-Shabaab.